Nhau - Ndeapi marongero emachira?
Iyo inonzi machira inoreva zvinhu zvemashizha zvakagadzirwa nemicheka yemachira. Jira micheka inogona kuiswa muzvikamu zvinoenderana nekushandisa kwavo uye nzira dzekugadzira. Zvinoenderana nechinangwa chejira chinogona kukamurwa muzvikamu zvitatu: machira ezvipfeko, machira ekushongedza, machira eindasitiri.
Mucheka wezvipfeko unosanganisira machira akasiyana-siyana anoshandiswa kugadzira zvipfeko, pamwe neakasiyana-siyana emachira senge tambo yekusonesa, bhanhire rakasungwa, bhandi rekoloni, lining, uye dzakarukwa mbatya dzakagadzirwa, magurovhosi, masokisi, nezvimwe.
Micheka yekushongedza yakatanhamara kupfuura mamwe machira maererano nemhando dzakasiyana, pateni uye kuenderana kwemavara, uye zvinogona kunzi ndezve mhando yeUnyanzvi nehunyanzvi. Micheka yekushongedza inogona kukamurwa kuita yemukati machira, machira emubhedha uye ekunze machira.
Maindasitiri machira anoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana siyana, senge fluffy jira, jira repfuti, jira resefa, skrini, nhanho yepasi.
Izvi zvinotevera zvakasarudzika zvemachira anowanzoshandiswa:
1. Jira rekotoni
Kotoni izita rakajairika remarudzi ese emachira ekotoni. Iyo inoshandiswa kugadzira fashoni, zvipfeko zvisina kujairika, zvipfeko zvemukati uye hembe. Zvakanakira zvirinyore kuchengetedza inodziya, yakapfava uye padyo nemuviri, kunyorova hunyoro, uye wakanaka mweya kukwana. Kukanganisa kwayo kuri nyore kudzikira, kuunyana, kutaridzika hakusi kwakatwasuka uye kwakanaka, mune kusakara kunofanira kugara kuri iron.
Hemp rudzi rwejira jira rakagadzirwa nehemp, furakisi, ramie, jute, sisal, banana uye imwe hemp chirimwa tambo. Inowanzo shandiswa kugadzira mbatya dzinoshanda uye dzinoshanda, uye parizvino, inoshandiswawo kugadzira mbatya dzechirimo dzakajairika. Zvakanakira kwazvo kukwirira kwesimba, kunyorova kwekunyorova, kuitisa kupisa, uye kugona kwemhepo kwakanaka. Kukanganisa kwaro hakuna kunyatso kusununguka kupfeka, chimiro chacho chakaomarara, chakaomarara.
Silika izwi rakajairika remachira akasiyana-siyana esirika akagadzirwa nesirika. Kufanana nekotoni, ine mhando dzakawanda uye hunhu hwakasiyana. Inogona kushandiswa kugadzira zvipfeko zvakasiyana, kunyanya zvevakadzi zvipfeko. Zvakanakira ayo akareruka, akakwana, akapfava, akatsetseka, kufefetedza, ane mavara, akapfuma mukubwinya, anokudzwa uye anoyevedza, akasununguka kupfeka. Kushomeka kwayo kuri nyore kuunyana, nyore kuyamwa, isina kusimba zvakakwana, inokurumidza kupera.
Woolen, inonziwo mvere, izwi rakajairika remachira akagadzirwa nemhando dzakasiyana dzemakushe uye cashmere. Inowanzo kuve yakakodzera kune yakasarudzika uye yepamusoro-magumo zvipfeko senge rokwe, sutu, jasi, nezvimwewo Zvakanakira izvi ndezvekuunyana uye kuomarara, zvinyoro-nyoro ruoko unzwe, yakashongedzwa uye yakajeka, yakasununguka, inodziya yakasimba. Kukanganisa kwaro kunonyanya kunetsekana nekuwacha, kwete kukodzera kugadzira mbatya dzezhizha.
Ganda imhando yemachira emvere dzemhuka akagadzirwa nekuchenesa. Iyo inoshandiswa kugadzira fashoni uye mbatya dzechando. Inogona kukamurwa muzvikamu zviviri: rimwe iganda, ndiko kuti, dehwe rinobatwa nemvere dzakapfuura. Yechipiri imvere, kureva kuti, dehwe rine bhandi mvere rakarapwa. Zvakanakira ayo akareruka uye anodziya, anoyevedza uye anodhura. Kukanganisa kwayo ndeyekuti inodhura, kuchengetedza uye zvinodiwa zveukoti zvakakwirira, saka hazvina kukodzera kufarirwa.
6. Chemical faibha
Chemical fiber ndiyo chidimbu chemakemikari fiber. Iyo mhando yemachira yakagadzirwa neyakakwira mamorekuru mukomboni. Kazhinji, inokamurwa muzvikamu zviviri: chakagadzirwa faibha uye chakagadzirwa faibha. Zvakanakira ivo zvakajairika kupenya kwemavara, kupfava kugadzirwa, kusvetuka, kutsetseka uye kugadzikana. Kukanganisa kwavo kupfeka kuramba, kupisa kupisa, kunyorova kunyorova uye kukwana kukwana, nyore kuumbika kana kupisa kuchiitika, uye electrostatic iri nyore kuburitsa. Kunyangwe ichigona kushandiswa kugadzira mhando dzakasiyana dzekupfeka, iyo nhanho yakazara haina kukwirira, uye zvinonetsa kusvika kuimba inoyevedza.
Kubatanidza rudzi rwejira rinobatanidza fiber yemusikirwo nemakemikari fiber mune chimwe chikamu, chinogona kushandiswa kugadzira mhando dzakasiyana dzekupfeka. Zvakanakira izvi hazvisi zvekungotora zvakanakira donje, hemp, sirika, mvere uye makemikari faibha, asi zvakare kudzivirira avo pachavo zvikanganiso zvakanyanya sezvinobvira, uye zvine hushoma hwakaderera kukosha, saka inozivikanwa.